Waqtiga Uu Ka Tegi Doono Arsenal, Shan Ciyaartoy Oo Lambarkiisa 10 Xidhan Kara Iyo Xaaladda Qasan Ee Mesut Ozil - GOOL24.NET
Waqtiga Uu Ka Tegi Doono Arsenal, Shan Ciyaartoy Oo Lambarkiisa 10 Xidhan Kara Iyo Xaaladda Qasan Ee Mesut Ozil
December 4, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Mesut Ozil ayay u muuqataa inuu ku jiro maalmihiisii ugu dambeeyey ee garoonka Emirates, dhawaanna uu soo afjarmi doono cimrigiisa Ingiriisku kaddib shan sannadood oo uu xidhnaa funaanadda Arsenal.
Laacibkan reer Germany ayaa ka baxay liiska ciyaaryahannada uu ku xisaabtamayo tababare Unai Emery oo u arka inuu yahay laacib tabcaan ah oo aan kulamada adag waxba samayn karin, waxaana uu seegay laba ciyaarood oo xidhiidh ah oo horyaalka Premier League ka tirsan.
30 jirkan ayaa la sheegay in dhamaadka xili ciyaareedkan uu ka bixi doono Arsenal, una wareegi doono kooxda aadka u xiisaynaysa ee Inter Milan.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan ciyaartoy oo marka uu Ozil tago ay Arsenal u dhaqaaqi doonto heshiiskooda iyo sidii ay usoo xero gelin lahayd.
Waa mid ka mid ah laacibiinta khadka dhexe ee weerarka xiga ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub, hubaashiina waxa raadinaya xiddigo badan oo midkood uu ugu dambayn uga wareegi doono lyon.
Laacibkan heerka caalami ee xulka qaranka Faransiiska, waxa xagaagii ku fashilantay Liverpool oo ugu dambayn ka qanacday, waxaase bakooradda u qaadan doonta Arsenal oo wakiilladeeda u diraysa sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen inuu xidho funaanadda laga siibayo Mesut Ozil.
Hibadiisa ciyaareed, kartidiisa iyo caqliga kubad ciyaarista u sahlay ee aad moodo inuu uurka hooyadii kala soo dhacay, ayaa Christian Pulisic ka dhigay laacibka ugu muhiimsan Borussia Dortmund.
Xiddigan u dhashay waddanka Maraykanka, waxa lala xidhiidhinayaa Chelsea iyo Liverpool, lacagta ay kooxdiisu ku fasixi kartana waxa lagu qiyaasay 70 milyan oo Gini, hase yeeshee sida ay ku warrantay warbaahinta Everning Standard, kooxda Arsenal ayaa kusoo biirtay tartanka, waxaana uu tababare Unai Emery doonayaa inuu u xidho funaanadda Mesut Ozil isagoo ku qancay inuu hoggaamin doono shaxda cusub ee uu doonayo inuu ku ciyaarsiiyo Gunners ee 3-4-3 oo ah mid uu la jaan-qaadi kari waayey Ozil.
Waa ciyaartoy uu Unai Emery si fiican aqoon ugu leeyahay maadaama ay kasoo wada shaqeeyeen PSG, balse laacibkan waxa la rumaysan yahay in aanu kusii jiri doonin xaaladda boos la’aanta ah ee ku haysata kooxda reer France.
Kooxo dhawr ah ayaa la sheegay inay isha ku hayaan laacibkan reer Germany, hase yeeshee Arsenal ayaa laba arrimoodba kaga horreysa naadiyada kale ee ku loollamaya. Qodobka koowaad, waa in macallinka ay saaxiibka yihiin ee Emery uu ku qancin karayo inuu qayb ka noqdo mashruuciisa cusub ee Emirates iyo midka labaad oo ah in uu boos ka helayo laacibiinta uu ka magaca weynaanayo ee kaga sii horreeya halkaas.
Dhibaato badan ayuu ku dareemayaa Real Madrid, kamana mid aha xiddigaha uu doonayo tababare Santiago Solari, sidaas daraadeed, Isco waxa uu ka fikirayaa inuu ka tago Real Madrid, meelaha laga doonayana waxa ka mid ah Arsenal oo uu u buuxin doono booska Ozil haddii uu tago xagaaga.